Yenza iintshukumo kwi-Photoshop yokonga ixesha kwinkqubo yokuhlela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenza iintshukumo kwi-Photoshop yokonga ixesha
UPablo Gondar | | Ukufota, Photoshop, Tutorials
Ciintshukumo ezingasemva kwi Photoshop ukugcuna ixesha kwinkqubo yokuhlela ngumbono olunge kakhulu xa sineefoto ezifanayo kwaye sifuna njalosebenzisa indlela efanayo yokuhlela kubo Photoshop. Izenzo ziyasivumela yenza iziphumo ezithile kwaye kamva usebenzise ezi ziphumo kumfanekiso ngokuzenzekelayo. Singa khuphela izabelo kwi-Intanethi okanye ngokulula ukudala ezethu izenzo yohlelo lwexesha elizayo.
Ukuba udiniwe kukuphinda uhlele kunye neefoto zakho kaninzi, ndincoma ukuba uqale usebenzise iintshukumo ze Photoshop for ligcine ixesha uyeke ukudikwa kukuphindaphinda uhlelo olunye ngaphezulu. Singawufumana umfanekiso othi emva kokufaka isenzo ayisiyiyo le nto besiyifuna okoko ukukhanya, izithunzi, umbala ... njl., Ukuba oku kwenzekile ngesenzo ngekhe kube yingxaki kuba Photoshop isivumela nje ukuba isenzo sisetyenziswe, sebenzisa iindlela zokukhetha kwakhona.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile yenza isenzo ekuvuleni imenyu yesenzo kwi Photoshop, kwimeko yokuba ifihliwe, singayisusa kwimenyu / kwiwindows / kwizenzo.
Sivula imenyu yesenzo kwaye senze isenzo ngokucinezela ukhetho olutsha.
Nje ukuba isenzo senziwe, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukukhetha ukhetho lwe qalisa ukurekhoda (imenyu yentshukumo) ukusukela ngalo mzuzu zonke iinkqubo into esiyenzayo iza kuhlala Ibhaliswe kwisenzo sethu. Singasebenzisa iirveve, utshintsho lombala, amanqanaba ... konke ukuphinda kulungiswe okuyimfuneko ekufotweni kwethu.
Kumfanekiso ongezantsi sinokubona ukuba isenzo senze njani ukurekhoda utshintsho olwenziwe kumfanekiso kwaye sinokufihla ezinye zeenkqubo.
Ukugqiba kufuneka simise ukurekhoda/yeka ukurekhodan (imenyu yezenzo) xa isenzo simisiwe, singagcina umfanekiso wethu.
ukuba sebenzisa isenzo sethu esitsha kwimifanekiso ezayo kufuneka sivule umfanekiso Photoshop kwaye uqale isenzo ngokucinezela ukhetho lokwenza ukhetho (imenyu yezenzo).
Ngezenzo oya konga ixesha kwezi foto zine-retouch efanayo, Ukuqinisekisa ukuba inkqubo yokuhlela ayiphindi iphindaphindwe. Ungagcina ulungiso oluthile kwaye ungalibali amanyathelo owalandeleyo kolo hlobo lokuhlela. Ukukhuphela kunye nokusebenzisa isenzo sisebenza ngendlela efanayo nale siyibonileyo kwinxalenye yokugqibela yeposi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Yenza iintshukumo kwi-Photoshop yokonga ixesha
Yintoni iBali lokuBalisa kunye nendlela yokulenza liphile nge-infographics
Sebenzisa iiplagi oza kuzisebenzisa kwi-Photoshop